Basanta Basnet: July 2012
Posted by Basanta Basnet at 2:40 AM No comments:
अमेरिकाबाट निस्कने टाइम म्यागजिनले तीन साताअघि भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको फोटो आफ्नो आवरणमा छाप्यो र मुन्तिर लेख्यो– द अन्डरअचिभर।
त्यसको दुई साता बित्दा नबित्दै भारतबाट प्रकाशित हुने म्यागजिन आउटलुकले गत हप्ता अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको फोटो उसैगरी आवरणमा छाप्यो। उसैगरि मुन्तिर लेख्यो– द अन्डरअचिभर।
अंग्रेजी शब्दकोशमा अन्डरअचिभरको साधारण अर्थ हुन्छ : अपेक्षा गरिएभन्दा थोरै नतिजा दिएको व्यक्ति। नेपालका ३६ औं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अन्डरअचिभर भन्दिए फरक नपर्ला– डिक्सनरीका शब्दहरूले उनकै लागि भनेर आफ्नो अर्थ बदल्दिएनन् भने।
Posted by Basanta Basnet at 12:38 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 5:17 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 5:14 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 1:45 AM No comments:
उपेन्द्र यादवसँग मैले अटोग्राफ लिएकोमा केही साथीहरुले कडा प्रश्न र टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँहरुलाई धन्यवाद छ। यादव नेतामात्रै होइनन्, बौद्धिक उचाइ भएका लेखक पनि हुन्। उनले थुप्रै स्तरीय िकताब लेखेका छन्। मैले नेताको होइन, लेखकको अटोग्राफ त्यो पनि उनकै किताबमा लिएको हो। जहाँसम्म "नेपालका नेतासँग अटोग्राफ लिनेले 'घुम्ने मेचमाथि' का लागि लिएको अन्तर्वार्ता के पढ्नु र खै" भन्ने सवाल छ, प्रश्नहरु त यो भन्दा अघिल्लो लिंकमा छँदैछन्। नपत्याए हेर्नूभए हुन्छ। म त्यति पुरानो पत्रकार त होइन, तर कति निर्मम र संवेदनशील भएर सोध्नुपर्छ भन्ने हेक्का मलाई छ। वास्तवमा म नेताहरुसँग मेरा प्रश्न होइन, तपाईंहरुका प्रश्न र गुनासा सोधिरहेको हुन्छु। जे होस्, फेसबुकमा रमाइलो गर्दागर्दै कहिलेकाहिँ गम्भीर बहस हुन्छ। त्यसमै त रमाइलो छ, होइन? हुन पनि 'ह्वाट्स अन् योर माइन्ड' भनेर सोध्छ। दिमागमा जे छ त्यही त भन्दिने हो। anyway, thanks to all.
Posted by Basanta Basnet at 4:53 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 2:32 AM No comments:
चर्चित कोलम्बियाली लेखक ग्याब्रियल गार्सिया मार्खेजलाई बिर्सने रोग 'डिमेन्सिया' लागेछ। आजको रिपब्लिकामा समाचार छ। हिजो नागरिकमा प्रकाशित बुद्धिसागरको "स्मृति बिक्री केन्द्र" मार्खेजले पढेको हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ। नत्र कसरी हिजै लेख छापिनु, आज स्मृति हराउनु??? अनुसन्धानको विषय भएको छ।
Posted by Basanta Basnet at 11:26 PM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 11:25 PM No comments:
खगेन्द्र संग्रौलाले मलाई बधाइ दिनु भो – 'घुम्ने मेचमाथि' मा शेरबहादुर देउवाको बोली बुझेर जस्ताको तस्तै टाइप गर्न सफल भएकामा। उहाँले बाह्रबुँदे समझदारी भएका बेला देउवाको अन्तर्वार्ता टिभीमा हेर्नु भएछ। तीनवटा च्यानल फेर्दा बल्ल भेउ पाउनुभएछ। वास्तवमा देउवाले भन्नुभएको रहेछ, 'वार्ता यहाँ गरे पनि हुन्छ, उहाँ (दिल्ली) गरे पनि हुन्छ, जहाँ गरे पनि हुन्छ।'
Posted by Basanta Basnet at 11:14 PM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 7:03 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 6:52 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 6:23 AM No comments:
यो वर्षको गुरु पूर्णिमा बहिनी कोपिलासँग मनाएँ। उसलाई मैले ग्रीक लेखक निकोलस केजको 'द टिचर हु चेन्ज्ड माइ लाइफ' शीर्षकको संस्मरण आज बिहान पढाएँ। ग्रीसको कम्युनिस्टको दमनमा परेकी आमाले बाबुसँग अमेरिका भगाएका केजको जीवनलाई कसरी एक गुरुआमाले बदल्न प्रेरणा दिइन्
Posted by Basanta Basnet at 6:18 AM No comments: